Akhriskayga Hada iyo Dib U Eegista Wikinomics | Martech Zone
Akhriskeyga Hadda iyo Dib-u-eegista Wikinomics
Axad, Maarso 11, 2007 Isniin, Maarso 12, 2007 Douglas Karr
Wikinomics wuxuu ahaa buug aan u aqrinayay Indy Book Mashup (Naadiga Buugga) halkan Indianapolis. Xaqiiqdii waxay ahayd inaan ku dhammeeyo buugga bil ka hor oo ay ahayd inaan la qabsado Aborijiniska Dijital ah.
Waxaa jira sabab ay u qaadatay waqti dheer. Kani waa ra'yigeyga shaqsiyadeed ee ku saabsan buuggan, qaar ka mid ah folks gabi ahaanba way diidi doonaan aniga. Shel Israel (waa buugga Wadahadal qaawan ayaa iga caawiyay inaan ku wado baloog), jeclaa Wikinomics! Waxaan u maleeyay inay runti sii jiidayso oo ay sii socoto.
Waxaan ixtiraam weyn u hayaa Don Tapscott, waa qoraa si adag ugu dhex dhisan adduunka ganacsiga iyo teknolojiyadda. Laakiin buugani wuxuu ahaa mid murugo leh si uu uga gudbo oo aan u haynin farxad marxaladdan cajiibka ah ee isbeddelkeenna aadanaha. Waxaa laga yaabaa inaan dul maro laakiin shabakada bulshada ayaa labadaba isku xireysa oo badaleysa aduunka, dhaqaalaha, dimuqraadiyada, ganacsiga, hantida aqooneed, iyo isgaarsiinta sidaan ognahay. Waa kacaan!
In kasta oo ay u akhrinayso sida dukumintiga Caymiska, waad layaabi kartaa waxaan u maleynayaa inay qalad tahay ma inaad iibsato oo aad akhrisid buuggan. Waa falanqeyn dhammaystiran oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa Wiki oo leh kiisas adeegsi wanaagsan oo ku baahsan dhammaan. Haddaan mar kale akhriyo, haddana, si fudud baan u akhrin lahaa Cutubka 8aad. Waa halka hilibka buuggu ku yaalo.
Cutubka 8aad wuxuu faahfaahinayaa "Dabaqa Dhirta Caalamiga ah", waxaan u maleynayaa inay tani soo koobeyso istiraatiijiyado ay dhammaan ganacsiyada u baahan yihiin inay qaataan oo ka kugula talin inaad u qaadatid suuqa:
Focus on qiimaha wadayaasha qiimaha
Ku dar qiimaha adoo adeegsanaya orchestration
Ku dhaji hannaanka naqshadeynta degdegga ah
Farshaxanka qaabdhismeedka qaabdhismeedka
Abuur nidaam deegaan oo hufan oo siman
La wadaag kharashaadka iyo halista
Ilaali mustaqbalka xiisaha leh
Kuma darayo buugga Wikinomics-ka liiska akhriska lagu taliyay, waa buug aad u tiro badan in guriga la keeno qodobbada muhiimka ah. Hadda waxaan u socdaa akhriskeyga xiga, Kalluunka 'Starfish' iyo 'Caarada': Awoodda aan la joojin karin ee Ururada aan Hoggaamiyaha lahayn.
Waxaan hayaa dhowr faallood oo dheeri ah oo aan sameeyo kuwan ka sokow:
Waan ku dhowaaday Xikmadda Doofaarka duulaya. Waa buug aad u fiican oo hoggaamiye kasta u yeelo inuu dhigto miiskooda habeenka ama geeska miiskooda. Jack Hayhow wuxuu si cad u cadeeyay waxa hogaamiyaasha waaweyni ka siman yihiin, oo ay ku soo biireen sheekooyin midabyo leh iyo xigashooyin dhiirigelin leh.
SOAP'd: Isku xoq Barnaamij Kale
Muxuu isbeddel ku dhoolla caddeeyaa!